Fomba 10 hampiatoana ny fahazaran-dratsy indray mandeha - An-Tsaina
Na ny miteny ratsy, ny fiantsenana tampoka, ny tsy fisakafoanana maraina, na ny fizahana ny Facebook isaky ny 2 minitra dia samy manana fahazaran-dratsy tsy tianay hofoanana daholo isika.
Ny olana dia ny fahazarana, amin'ny natiora, dia mahazatra azy ireo mipoitra avy any an-tsaintsika tsy mahatsiaro tena toy ny hoe tsy mahafehy azy ireo isika. Saingy voafehinao ary azonao atao ny mamily ny fahazaran-dratsinao raha manaraka io torohevitra io ianao.
1. Aza hadino ny momba azy ireo
Mba hahafahana miady amin'ny fahazaran-dratsinao dia tsy maintsy ampiofaninao aloha ny fifantohanao mba tsy hipetrahany ao anatiny intsony ampahany tsy mahatsiaro ao an-tsainao . Raha te hahalala fihetsika vaovao - na amin'ity tranga ity hahafahanao tsy mahay mianatra fihetsika ankehitriny - dia tsy maintsy ataonao ny sainao manontolo. Amin'izay ianao vao afaka manomboka mamerina ny atidohanao ary manao veloma ny fahazaran-dratsinao.
ny daty famotsorana trano vorondolo
Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ny fahazarana dia miaraka amin'ny fanentanana. Rehefa manaiky an'io faniriana io isika dia mampiseho ilay fihetsika tsy ilaina. Raha tadidio izany dia tsy maintsy miambina hatrany ianao amin'ny fotoana rehetra ary manandrana mamantatra ireo fanentanana ireo alohan'ny hitondrany ilay fahazarana.
Rehefa afaka mahatsikaritra ny filana rehefa mitombo izy vao afaka manomboka miady alohan'ny fihazonana azy.
2. Ekeo ny rahampitso ianao amin'ny hetsika ankehitriny
Betsaka ny olona tsy mahavita mampifandray ny hoaviny amin'ny zavatra ataony ankehitriny. Ny sain'izy ireo dia mamitaka azy ireo amin'ny tsy firaharahiany ny voka-dratsy ateraky ny fahazaran-dratsiny ary izany dia manajamba azy ireo amin'ny filàna kivy.
Ny fikolokoloana rohy ao an-tsainao eo anelanelanao anio sy ny ampitso dia hampirisika ny fihetsika feno fiheverana bebe kokoa izay mitaky ny fiadanan'ny fiainanao ho avy.
Alao sary an-tsaina ny fanananao resaka miaraka amin'ity kinova ho avy anao ity dia mihaino ny fampitandreman'izy ireo ary ampiasao izany ho fampahatsiahivana isaky ny mahatsapa ianao fa mifehy ny fanao mahazatra anao.
3. Raiso indray mandeha ny fahazaran-dratsy iray
Mety manana fahazarana maro tianao hiala ianao, saingy ny finiavana dia loharano voafetra, ary ny fanandramana hikirakira zavatra be loatra indray mandeha dia hampitombo ny mety tsy fahombiazana.
Ka mifikira amin'ny fahazaran-dratsy iray isaky ny mandeha, mifantoha amin'izany ny sainao rehetra ary kapohy izany alohan'ny hirosoanao amin'ny fanamby manaraka.
4. Aza miraharaha ny tahotra tsy fahombiazanao
Mety tsy hanandrana hamaha ny fahazaran-dratsinao akory ianao mandra-pandresena ny tahotra anananao sao tsy mahomby. Ny tsy fahombiazana dia zavatra voajanahary tsy mila famaranana ary tsy mila maharary izany raha tsy avelanao.
Tokony hanaiky tahotra toy izany ianao ary hamaly izany amin'ny fahitana azy hoe: vokatra avy amin'ny ego anao.
Lahatsoratra mifandraika: Ny tena antony anananao tahotra ny tsy fahombiazana (sy ny zavatra hatao momba izany)
5. Aza tezitra rehefa resy indray
Tsy mora ny miala amin'ny fahazaran-dratsy, ary azo inoana fa hiverina amin'ny fihetsika matetika ianao amin'ny fotoana iray alohan'ny handresenao azy indray mandeha.
Mba hanomezana anao ny vintana tsara indrindra hamerenana ny fikarohanao aorian'ny fiverenanao indray dia tsy tokony ho tezitra amin'ny tenanao ianao. Mahaiza mamela heloka, mahaiza manazava, ary manetre tena aza tezitra fotsiny.
6. Aza milaza amin'ny olona ny tanjonao
Mety toa tsy mifanaraka amin'ny laoniny izany, fa amin'ny filazanao ny tanjonao handresy fahazaran-dratsy dia mampihena ny fahafahanao hahomby. Amin'ny filazanao amin'ny hafa izay tianao hahatratrarana dia mamitaka ny sainao ianao amin'ny hinoanao fa efa antsasaky ny lalana any ianao.
Izany dia mifandraika amin'ny fantatra amin'ny hoe tanjona kendrena . Azonao atao ny manapaka ny fahazaran-dratsy hanovana ny fomba hahafantaranao ny tenanao na anaty sy ivelany. Raha vantany vao ampahafantarinao ny olon-kafa ny zavatra ataonao dia manomboka mahita anao amin'ny fomba hafa izy ireo. Io dia maharesy lahatra ny sainao fa ny tanjon'ny tena dia efa vita amin'ny ampahany.
Amin'ny ampahany amin'ny tanjonao dia toa tratra, tsy dia miezaka mafy ianao amin'ny fanaovana azy io ho tena izy.
Aza milaza amin'olona na inona na inona ezahanao hotanterahina fa mandehana mangina fotsiny any aoriana.
7. Miezaha tsy hanome valisoa ny fandrosoana amin'ny Binge
Ny vato mahatafintohina iraisana ho an'ireo izay mitady handresy fahazaran-dratsy dia ny manome valisoa ny fandrosoana tsara amin'ny alàlan'ny fihoaram-pefy amin'ilay zavatra ezahiny resena.
aiza no misy Hulk hogan
Noho izany ianao dia mety manandrana manome sakafo siramamy manokana na zava-pisotro fantatrao fa ratsy ho anao. Rehefa avy nandany herinandro iray manontolo nefa tsy nandany azy dia mety hieritreritra ianao fa tsy maninona ny mitsabo tena amin'ny vitsivitsy amin'izy ireo amin'ny faran'ny herinandro, fa vao mainka hanasarotra ny fandehanana izany raha tsy amin'ny herinandro manaraka.
Ny Binging ho valisoa amin'ny fandrosoana dia dingana iray, dingana roa miverina.
Raha mila valisoa ianao dia ataovy izay tsy misy ifandraisany amin'ilay fahazaran-dratsy tadiavinao tapahina.
ahoana no ahalalanao raha mifankatia ianao
8. Mitadiava mpisolo toerana na fomba hafa tsy manimba
Misy fahazaran-dratsy sasany izay ahafahana manolo fanoloana mivantana izay mamela anao hitazona fatra mahazatra, fa tsy misy dikany ratsy.
Raha marefo ianao amin'ny fividianana akanjo vaovao saika isan-kerinandro dia mitadiava fihaonana ifanakalozana eo an-toerana ahafahanao manaramaso ny fanirianao hanana endrika vaovao nefa tsy handratra ny fifandanjan'ny bankinao.
Na raha sahirana tamin'ny famelana ny fifohana sigara taloha ianao dia andramo ny mampiasa e-sigara izay ahafahanao mitazona endrika mitovy amin'io fahazarana io, nefa tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamanao.
9. Mitadiava fanampiana
Rehefa tena mandratra anao ny fahazarana iray, ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny mitady fanampiana amin'ny matihanina. Mety ho toa kely loatra noho ny fahazarana madinidinika ity, saingy rehefa misy filana maika hanary zavatra, matetika ny fomba mahomby indrindra dia ny manatona manam-pahaizana manokana momba ny fitarihana.
Na lasa fahazaran-dratsy ny fahazarana amin'ny haino aman-jery sosialy, na tsy azonao atao ny mijanona tsy manaikitra nify, dia misy serivisy azonao itodihana fanampiana.
10. Soloy fahazarana ratsy amin'ny fahazarana tsara
Satria tsy manana fotoana, fifantohana ary fiheverana betsaka fotsiny isika, azo atao ny mandroaka ny fahazaran-dratsy amin'ny fiainanao amin'ny alàlan'ny fandaniana fotoana amin'ny fahazarana tsara vaovao.
Angamba ianao te hiala amin'ny fitaoman'ny gazety mifosafosa olo-malaza, ohatra. Ny famakiana boky, ny fanaovana piozila, na ny fianarana manao sary aza dia zavatra afaka mameno ny fotoana izay hamonoanao matetika amin'ny famakiana momba ireo olo-malaza. Ary ireny dia fialamboly rehetra izay afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fahaizanao misaina.
Na inona na inona fahazaran-dratsinao, na dia toa manimba inona aza izy ireo, dia tokony hiezaka ny handresy azy ireo, amin'ny fampiasana ny sasany amin'ireo torohevitra asongadinina etoana ao anatin'ny drafitry ny asanao.
Inona avy ireo fahazaran-dratsy tadiavinao? Mametraha hevitra etsy ambany ary ampahafantaro anay.
ahoana no ahalalanao raha tsara tarehy ianao
ahoana no ahafantaranao raha misy mpiara-miasa aminao ao aminao
tononkalo momba ny fahafatesan'ny olon-tiana iray manentana ny fanahy